मदन भण्डारीको ह-त्या कसले र किन गर्यो? बादलले खोले भित्रि र'ह स्य
मदन भण्डारीको ह-त्या कसले र किन गर्यो? बादलले खोले भित्रि र’ह स्य
काठमाडौं,भाद्र । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादलले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको ह -त्या भएको बताएका छन् । उनले मदन-आश्रितको ह -त्यामा नियोजित उद्देश्य समेत रहेको बताए ।
‘मदन भण्डारीको किन ह -त्या गरियो ?’ बादलले नेकपा एमालेको काठमाडौं जिल्लास्तरीय प्रशिक्षणमा भने, ‘यसका पछाडि राजनीतिक कारण छ ।’ मदन भण्डारी राजतन्त्रको वि’रुद्ध गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको वि’रुद्ध हुनुन्थ्यो ।
दु’ र्घ ट नाका रुपमा मदन भण्डारीको ह -त्या गरिएको उनको भनाई थियो । बादलले जनताको बहुदलीय जनवादको समेत व्याख्या गर्दै भण्डारीको विचारले कम्युनिस्ट आ न्दो ल नमा नयाँ जग बसालेको बताए । बादलले नेकपा एमालेको वि भाजनतर्फ संकेत गर्दै दक्षिणपन्थी धा’र परास्त भएको बताए । उनले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ताबाट हटाएर ष ड्य न्त्र भएको बताए । यसलाई प्रतिक्रा’न्तिको संज्ञा दिए ।